Maxay shan dal ku diideen dadka saaran markabkan? - BBC News Somali
Image caption Markabka ay shanta dal diideen
Markab nooca dalxiiska ah oo lagu magacaabo MS Westerdam ayaa gaaray deked ku taala dalka Combodia, ka dib markii shan dal oo caalamka ah ay diideen in ay u oggolaadaan in uu kusoo xirto dalkadahooda.
Markabkan oo ay saaran yihiin dad gaaraya afar kun oo qof oo dalxiisayaal ah waxaa loo diiday in ay ka degaan shan dal oo kala ah Taiwan, Guam, Philippines iyo Japan, waxaana looga shakiyay inay qabaan xannuunka Coronavirus.
Markab kale oo tegay dalka Japan toddobaadyo kahor, waxaa dadkii saarnaa laga helay laba boqol oo qof oo qaba caabuqa Corona, waxaana taas ay keentay in dalal badan ay ka aragagaxaan dadka saaran markabkan, haseyeeshee illaa iyo hadda ma jiro dad laga helay xannuunkaas oo saaran markabkaas.
Maalma kahor ayuu markabkan isku dayay in uu tago Magalaada Bangkok ee dalka Thailand, balse Dowladda dalkaas ayaa u diiday in uu kusoo xirto mid ka mid ah dekadaheeda.
Ciidanka badda ee Thailand ayaa sii ambabaxiyay markabka, si aan ugu dhaqaaqin qeyba kale oo kamid ah dalkaas.
Markabkan ayaa ugu dambeyntii gaaray dekeda Sihanoukville ee dalka Combodia, ka dib markii Dowladda dalkaas ay aqbashay inay soo dhaweyso dadkaas.
Rakaabka saaran markabkan ayaa loo oggolaaday inay gudaha u galaan dalkaas, waxaana wasiirka caafimmaadka ee Combodia uu sheegay in 27 ka mid ah dadkaas lagu sameeyay baaritan tijaab ah, wax cudur ahna aanan laga helin.
Markabka Westerdam ayaa ka soo ambabaxay Hong Kong, 1-dii bishii Febraayo, waxaana saarnaa dad ka badan laba kun oo qof.
Dalxiisayaahsa saaran markabkan waxay markii hore qorsheynayeen dalxiisaan laba toddobaad ah, waxaana maalmahan walaac laga qabay in shidalaka iyo sahayda saaran markabka ay gabaabsi tahay.
"Waxaan rajo wayn ka qabnay in aan dib ugu laabaneyno dalalkena, balse waxaan ka war helnay in nala diiday," ayuu yiri qof ka mid ah dadka saaran markabka.
Dalxiisayaashaas marka ay ka degaan markabka waxaa la sheegay in loo kala diri doono dalalka ay ka soo kala jeedaan.
Safaaradda Mareykanka ee dalka Colombia ayaa sheegtay in halka uu taagan yahay markabka ay u direyso koox caawiya muwaadiniinta u dhashay dalkaas ee ka mid ah rakaabka markabka.
Hey'adda caafimmaadka adduunka ee WHO ayaa bogaadisay go'aanka Dowladda Cambodia ay ku soo dhaweysay dadkaas.
"Waxay tusaale u tahay isgarab istaaga caalamiga ah oo aan marwalba ku baaqeynay", ayuu yiri madaxa hey'adda caafimaadka adduunka ee WHO, Tedros Ghebreyesus.
Waxaa maalma baaritanno joogto ah lagu sameynayay dadka saaran markabka Westerdam, illaa iyo haddana ma jira qof laga helay xanuunka oo saaran markabka.